Amaloota dimshaashaa galmeelee Microsoft Office lakaddaa VBA wajjin fe'uu fi olkaa'uuf ifteessa.
Maayikiroosoofti Word 97/2000
Qindaa'inoota galmeelee Maayikiroosooft Word 97/2000 filadhu.
Lakaddaa Bu'uuraa gulaaluuf fe'i
Lakkaddaan VBA (Visual Basic for Applications) fe'amee raawwatamuuf qophaa'a. Yoo haalojiin kun mirkanaa'uu baate, lakkaddaan VBA akka ilaalamuuf yaadni itti kennama, garuu hin ka'u.
Lakaddaa Bu'uuraa jalqabaa olkaa'i
Yeroo gita Microsoft ala gita biraan olkeessu,lakaddaan bu'uuraa Microsoft hin olkaa'amu.Fakkeenyaaf,yoo galmeen lakaddaa bu'uuraa Microsoft qabaatee fi gita LibreOffice tiin olkeesse,akka lakkaddaan Microsoft bu'uuraa ol hin kaa'amne of eeggachiisa agarta.
Sanduuqni dhugoomsaa Ammas lakaddaa bu'uuraa jalqabaa olkaa'i dursa sanduuqa dhugoomsaa Lakaddaa bu'uuraa gulaaluuf fe'i irraa fudhata. Yoo sanduuqni lachuu mallattaa'anii fi lakaddaan bu'uuraa IDE bu'uuraa LibreOffice keessaa hin dandeessifamne gulaalte, lakaddaan bu'uuraa Maayikiroosooftii yeroo gita Maayikiroosooftii tiin olkeessu olkaa'ama. Kana sitti himuuf ergaan ni mul'ata.
Vaayirasoota macro bu'uuraa Maayikiroosooftii danda'aman kamiyyuu balleessuuf, sanduuqa dhugoomsaa Lakaddaa Bu'uuraa jalqabaa olkaa'i mallattaa'uu dhorkiitii galmee gita Maayikiroosooftii tiin olkaa'i. Galmeen lakaddaa bu'uuraa Maayikiroosooftii malee olkaa'ame.
Maayikiroosooftii Excel 97/2000
Qindaa'inoota galmeelee Maayikiroosooftii Excel 97/2000 keessaatiif ifteessa.
Maayikiroosooftii PowerPoint 97/2000/XP
Qindaa'inoota galmeelee Maayikiroosooftii PowerPoint keessaatiif ifteessa.
Firoomina Akaakuuwwan Galmee Maayikroosoofti Offisii jijjiiruu
Waa'ee Galmeewwan Maaykiroosoofti Offisii Jijjiiruu
Gita durtii faayilii qindeessuu
Title is: Amaloota VBA